prose poetry | လမ်းအိုလေး
လူတစ်ယောက်ဟာ သစ်ရွက်နှစ်ရွက်ကို တွေ့တယ်။ သစ်ရွက်တွေကိုကိုင်ပြီး အိမ်ထဲဝင်လာရင်း သူ့မိဘတွေကို ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ သစ်ပင်တစ်ပင်ပါ။
ဒါဆိုရင် ခြံထဲကို သွားချေ။ ဧည့်ခန်းထဲ လာမပေါက်နဲ့။ နင့်ရဲ့ အမြစ်တွေက ကော်ဇောတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ်လို့ သူ့မိဘတွေက ပြန်ပြောတယ်။
သူက ပြောတယ်။ ကျွန်တော် လျှောက်နောက်နေတာပါ။ ကျွန်တော် သစ်ပင် မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့လက်ထဲက သစ်ရွက်တွေကို လွှတ်ချလိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့ သူ့မိဘတွေက ပြောတယ်။ ကြည့်ပါဦး သစ်ရွက်ကြွေတဲ့ ရာသီကိုတောင် ရောက်ပြီပဲ။
အက်ဒ်ဆန်ဟာ ဆက်စပ်ဝန်းကျင်တွေကို ပဉ္စလက်ဆန်ဆန် ကိုင်တွယ် ပြုလုပ်ပြီး စကြဝဠာတစ်ခုကို ပြန်လည်ဖန်တီး၊ ပြန်လည်ကိုယ်စားပြုသူ ဖြစ်တယ်။ ရလဒ်အားဖြင့် တည်ဆောက်ရာမရ ဖြစ်လောက်အောင် ရယ်စရာလည်း ကောင်း၊ ထိတ်လန့်စရာလည်း ကောင်းတယ်လို့ မာ့ခ်တူရ်ဆီက ဆိုပါတယ်။ ဆက်စပ်အခြေအနေတွေကို စူးစမ်းရေးသားသွားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကဗျာတွေရဲ့ ဦးတည်ရာကို ကြိုတင်မှန်းဆဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။
Categories: Kabyarz, Prose Poetry | Tags: မောင်﻿﻿ဒေး, Kabyarz, maung day, prose poetry, the toy maker | Permalink.
ကမ္ဘာကြီး တစ်ပတ်လည်တယ် နှစ်ပတ်လည်တယ် သုံးပတ်လည်တယ် (​မောင်​​ဒေး)
ကမ္ဘာကြီး တစ်ပတ်လည်တယ် နှစ်ပတ်လည်တယ် သုံးပတ်လည်တယ် တစ်နေ့ကို ထမင်းသုံးကြိမ်စားရလို့ ဝမ်းသာရတယ် တစ်ပတ်ကို ရုပ်ရှင် တစ်ကားကြည့်ရလို့ ပျော်ရတယ် ဆင်းရဲသားတွေပဲ စစ်တပ်ထဲကိုရောက် တိုက်ပွဲမှာသေရလို့ တော်ပါသေးရဲ့ဆိုပြီး ရင်ထဲက အလုံးကြီး ကျရတယ် သုံးရက်တစ်ခါလောက် လိင်ဆက်ဆံခွင့်ရ… တစ်နှစ်တစ်ခါလောက် ကဗျာ
Categories: Kabyarz, Prose Poetry | Tags: မောင်﻿﻿ဒေး, Kabyarz, maung day, prose poetry, the green book | Permalink.
ရာသီဥတု ငါနဲ့အတူရှိပါစေ (​မောင်​​ဒေး)
ရာသီဥတု ငါနဲ့အတူရှိပါစေ ငါ့ရဲ့အခန်းထဲမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က
မှန်တစ်ချပ်လာထားသွားတယ် မနက်တိုင်းမှာ အဲဒီမှန်ကိုမကြည့်မိဖို့ ငါ ကြိုးစားရတယ် သစ္စာတရားဆိုတာ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာလိုပဲ
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ Peak ဖြစ်သွားပြီး အကျဘက်ကိုပဲ ရောက်လာခဲ့ပြီ
ငါတို့အထိတ်တလန့် ဖြစ်ရတဲ့အရာဟာ အခုအိမ်ရှေ့မှာ မဟုတ်ဘူး
အိမ်ထဲကို ရောက်လာခဲ့ပြီ မန်ကျည်းပင်ပေါ်က ပုရွက်ဆိတ်ကလေးတွေ တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်ထပ်ပြီး စုလိုက်တော့ ငါ့ရဲ့ဦးခေါင်း ဖြစ်လပါလေရော — နေဟာ တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် လင်းတယ် — လေဟာ တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် တိုက်တယ်– ဒါပေမယ့် နောင်အနှစ်၅၀ မှာ ညအချိန်ဆိုတာ ရှိနိုင်ပါဦးမလား ဟိုက္ကူကဗျာတွေထဲမှာ ချယ်ရီပင်တွေ
မူလဆီသွားဖို့ လေထဲမှာ စက်ဝိုင်းကို သင်ရေးဆွဲလိုက်တယ်။ စက်ဝိုင်းဟာ သိပ်မဝိုင်းလှဘူး။ အိမ်ထဲကမထွက်ခင် အိမ်ဖော်မလေး ရဲ့ပါးကို သင်ခိုးနမ်းခဲ့သေးတယ်။ သင့် မိန်းမ ဖုန်းပြောနေတုန်း။ မူလဆီသွားခြင်းဟာ မူလဆီပြန်ခြင်း မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကို မသိရင် မြင်းဟာ ကျာပွတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီခြေကြိုခြေကြားတွေထဲ လိမ့်နေတဲ့ မျက်ရည်ယိုဗုံး နောက်လည်း တကောက်ကောက်လိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ လူတိုင်း ဟာ ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖြစ် ကြောင်ကို ခြေထောက်နဲ့ ကန်မိတာပဲ။ ဒါဟာ မူလဆီသွားဖို့ ဖြစ်လာစေမယ့် အကြောင်းတစ်ခုလို့ ဘယ်သူက သိနိုင်မှာလဲ။ မူလဆီသွားဖို့ သူဟာ သူ့မျက်လုံးတွေကို ထိုးဖောက်လိုက်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ လိုမလို သူလည်းမသေချာဘူး။ လေဆိပ်က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိရှေ့က ကင်မရာလို သူဟာ မျက်နှာတွေကို ငြီးငွေ့လာလို့လား။ ဂင်္ဂါမြစ်ပေါ်မှာ ခြေတစ်ဖက်တည်းနဲ့ ရပ်နေတဲ့ ဆာဒူးတွေရော မူလဆီ သွားနေတာလား။ အထည်ချုပ် အလုပ်သမလေးဟာ မူလဆီမသွားခင် တင်ပါးပေါ်မှာ အသည်းပုံတက်တူး ထိုးလိုက်တယ်။ Continue reading →
Categories: Kabyarz, Prose Poetry | Tags: Aung Khin Myint, အောင်ခင်မြင့်, Kabyarz, prose poetry | Permalink.
လူတိုင်းကို ပျော်အောင်ထားခြင်း/ မျိုးသုဉ်းသွားပြီဖြစ်သော အမွေးရှည် အစွယ်ကောက် ဆင်ကြီးတစ်မျိုး (မောင်ဒေး)
တည်ဆောက်။ ဖျက်ဆီး။ ပြန်လည်တည်ဆောက်။ ဖျက်ဆီး။ တည်ဆောက်။
ဖျက်ဆီး။ ပြန်လည်တည်ဆောက်။ ဖျက်ဆီး။ တည်ဆောက်။ ဖျက်ဆီး။
ပြန်လည်တည်ဆောက်။ ဖျက်ဆီး။ တည်ဆောက်။ ဖျက်ဆီး။ ပြန်လည်
တည်ဆောက်။ ဖျက်ဆီး။ တည်ဆောက်။ ဖျက်ဆီး။ ပြန်လည်တည်ဆောက်။
ဖျက်ဆီး။ တည်ဆောက်။ ဖျက်ဆီး။ ပြန်လည်တည်ဆောက်။ ဖျက်ဆီး။
ပြန်လည်တည်ဆောက်။ ဖျက်ဆီး။ တည်ဆောက်။
Categories: Kabyarz | Tags: alluvial plain of ogres, မောင်ဒေး, Kabyarz, lanolay, maung day, prose poetry | Permalink.